Akụkọ - Ntuziaka pere mpe na SPL Evaporative Condensers
Arụla ọrụ ọ bụla na ma ọ bụ n'akụkụ ndị agbapụ, motọ, ma ọ bụ draịva ma ọ bụ n'ime ngalaba na-ebughi ụzọ hụ na akwụpụrụ ndị Fans na nfuli, kpọchie ha, ma pịa ha.
Lelee iji hụ na ofufe fan biarin na-setịpụrụ nke ọma iji gbochie moto bufee.
Oghere na / ma ọ bụ igbochi ihe mgbochi nwere ike ịdị na okpuru mmiri mmiri oyi. Kpachara anya mgbe ị na-eje ije n'ime akụrụngwa a.
Ebumnuche dị elu nke unit ahụ abụghị maka iji dị ka elu na-agagharị ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ọnụ ụlọ ahụ, a dọrọ onye zụrụ azụ / onye njedebe aka na ntị iji ụzọ kwesịrị ekwesị na-agbaso ụkpụrụ nchekwa dị mma nke ndị ọchịchị.
A naghị emepụta ọkpọ mmiri iji kwado ibu arọ nke mmadụ ma ọ bụ ka ejiri ya mee ihe nchekwa ma ọ bụ ọrụ ọrụ maka akụrụngwa ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla. Iji ihe ndị a dịka ịga ije, ịrụ ọrụ ma ọ bụ ebe nchekwa nwere ike ịkpata mmerụ ahụ ndị ọrụ ma ọ bụ mebie akụrụngwa. Enweghị ike iji teepu rọba kpuchie nkeji nke nwere ndị na-ekpochapụ nwayọọ.
Ndị ọrụ gosipụtara ozugbo mmiri iyi na mmiri na-emetụta, nke a na-emepụta n'oge ọrụ nke usoro nkesa mmiri na / ma ọ bụ ndị fan, ma ọ bụ ikuku nke mmiri mmiri dị elu ma ọ bụ ikuku jikọtara (ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe dị ọcha nke usoro mmiri na-agagharị) , ga-eyi akụrụngwa na-echebe iku ume nke ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ ahụike gọọmentị kwadoro maka nke a.
A naghị emepụta okpomoku bekee iji gbochie icing n'oge arụ ọrụ. Ejikwala okpomoku bezin maka ogologo oge. Ọnọdụ ọkwa mmiri dị ala nwere ike ime, na sistemụ agaghị akwụsị nke nwere ike ibute mmebi nke kpo oku na otu.
Biko rụtụ aka na Mmachi nke Akwụkwọ ikike na ntinye ederede ejiri metụta yana na mmetụta n'oge ire / ịzụta ngwaahịa ndị a. Ndị akọwapụtara na akwụkwọ ntuziaka a bụ ọrụ akwadoro maka mbido, ọrụ, na mmechi, yana oke nke ọ bụla.
A na-etinyekarị ngalaba SPL ozugbo ebupụ ya ma ọtụtụ na-arụ ọrụ n'afọ niile. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a ga-echekwa unit ahụ ruo ogologo oge tupu ma ọ bụ mgbe echichi, etinye ụfọdụ nlezianya anya. Iji maa atụ, iji okpu plastik prọks kpuchie nkeji ahụ n'oge nchekwa nwere ike ịdaba okpomọkụ n'ime nkeji ahụ, nwere ike imebi ihe juputara na plastik ndị ọzọ. Ọ bụrụ na a ga-ekpuchi akụkụ ahụ n'oge nchekwa, a ga-eji tarp na-egbuke egbuke.
Igwe eletriki, igwe, na igwe na-agagharị niile bụ ihe ọghọm, ọkachasị maka ndị na-amachaghị etu esi arụ ha, etu esi arụ ha, na ọrụ ha. Ya mere, jiri usoro mkpọchi kwesịrị ekwesị. Ekwesiri iji nchekwa a zuru oke (gụnyere ojiji nke ogige mkpuchi ebe ọ dị mkpa) iji chebe ọha na eze pụọ na mmerụ ahụ yana iji gbochie mmebi nke akụrụngwa, usoro metụtara ya, na ogige ahụ.
Ejila mmanụ nwere ihe nhicha maka ebu mmanụ. Mmanụ na-ehicha akwa ga-ewepu graafịt na uwe aka na-ebu ya. Ọzọkwa, esogbula itinye ndọtị site tightening na-ebu okpu ukpụhọde na a ọhụrụ unit dị ka ọ bụ torque- gbanwee na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Agaghị arụ ọrụ akụrụngwa a n'enweghị ihe mkpuchi niile, oghere ịnweta, yana ụzọ ụzọ. Maka nchebe nke ndị ọrụ ikikere na ndị ọrụ mmezi, wụnye ihe nkwụsị mkpọchi mkpọchi nke dị nso n'anya ụlọ na fan ọ bụla na igwe mgbapụta metụtara ngwa a dịka ọnọdụ bara uru.
A ga-arụ ọrụ usoro na arụmọrụ iji kpuchido ngwaahịa ndị a megide mmebi na / ma ọ bụ belata arụmọrụ n'ihi enwere ike ịkwụsị.
Ejila chloride ma ọ bụ chlorine dabere na solvents dị ka ịcha ọcha ma ọ bụ muriatic (hydrochloric) acid ọcha igwe anaghị ata nchara. Ọ dị mkpa ka mmiri sachaa elu ya na mmiri ọkụ ma hichaa ya na akwa akọrọ mgbe ịsachachara.
General Mmezi Ozi
Ọrụ ndị achọrọ iji nọgide na-enwe mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ evaporative bụ isi ọrụ nke ogo ikuku na mmiri na mpaghara nke ntinye.
AIR: Ọnọdụ ikuku kachasị emerụ bụ ndị nwere anwụrụ ọkụ ndị na-adịghị ahụkebe, anwụrụ ọkụ kemịkalụ, nnu ma ọ bụ nnukwu uzuzu. A na-ebute ụdị adịghị ọcha dị otú ahụ n'ime akụrụngwa ma na-etinye uche na mmiri nlọghachi iji mepụta ihe na-emebi emebi.
Mmiri:Ọnọdụ kachasị emerụ ka mmiri na-eto dị ka mmiri na-amịpụta site na akụrụngwa, na-ahapụ ihe ndị gbazere agbaze dị na mmiri etemeete. Ihe ndị a na-agbaze nwere ike ịbụ alkaline ma ọ bụ acidic ma, ebe ha na-etinye uche na mmiri na-ekesa, nwere ike ịmepụta ma ọ bụ mee ngwa ngwa.
Ogologo adịghị ọcha na ikuku na mmiri na-ekpebi ugboro ole ọrụ mmezi na-achịkwa oke ọgwụgwọ mmiri nke nwere ike ịdị iche site na ọgbụgba ọbara na-aga n'ihu na nchịkwa ndu na usoro ọgwụgwọ ọkaibe.
Post oge: Mee-14-2021